သမ္မတနှင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအတွက် ကျည်ကာကား ၆ စီးဝယ်ယူရာတွင်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် တင်ပြ | Akonthi
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအတွက် ကျည်ကာကား ၆ စီးဝယ်ယူရာတွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက တင်ပြလိုက်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်က ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ယခုကဲ့သို့တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဝယ်ယူမယ့်မော်တော်ယာဉ် ၆ စီးဝယ်ယူရာတွင် ကျသင့်သည့် အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တို့ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက် လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ရန်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်တော်ယာဉ် ၆ စီးကိုဝယ်ယူရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံမှ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက်တန်ဖိုး၊ တိုက်ရိုက်မှာယူသည့်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများရဲ့ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ သွားလာရာတွင် လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစွာနှင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဧည့်သည်တော်များ၏ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များတွင်လည်း နိုင်ငံတော်ဧည့်ယာဉ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
၀ယ်ယူမည့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားမှာ တိုယိုတာ လန်ခရူဆာ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ တို့ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၆ စီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက်တန်ဖိုးအနေဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇.၃၅၉၂ သိန်းဖြစ်ကာ ၎င်းအပေါ်တွင် အထူးကုန်စည်အဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ- ၁၁ ပါပြဌာန်းချက်အရ ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၆၇၉၆ သိန်းကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အဖြစ် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ-၁၄ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အထူးကုန်စည်ခွန်အပါအ၀င်ဖြစ်သော ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုး၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀. ၅၅၁၉ သိန်းကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်ခြောက်စီးအတွက် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ကျပ် ၇၄၉. ၉၉၈ သန်း ခွင့်ပြုပါရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
-- အံ့ညီညီ- နေပြည်တော်(အကုန်သိသတင်းဌာန)
နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့နိုငျငံတျောအကွီးအကဲမြားအတှကျ ကညျြကာကား ၆ စီးဝယျယူရာတှငျ အခှနျကငျးလှတျခှငျ့ပွုရနျ စီမံကိနျး၊ ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ စကျမှုဝနျကွီးဌာန၊ ဒုတိယဝနျကွီး ဦးမောငျမောငျဝငျးက တငျပွလိုကျသညျ။
ဒီဇငျဘာလ ၅ ရကျက ကငျြးပသညျ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောတှငျ ယခုကဲ့သို့တငျပွလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။
“၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ်ဍာရေးနှဈမှာဝယျယူမယျ့မျောတျောယာဉျ ၆ စီးဝယျယူရာတှငျ ကသြငျ့သညျ့ အထူးကုနျစညျခှနျနှငျ့ကုနျသှယျလုပျငနျးခှနျတို့ကငျးလှတျခှငျ့ရရှိရေးတို့အတှကျ လှတျတျောရဲ့အတညျပွုခကျြ ရယူနိုငျရနျရှငျးလငျးတငျပွခွငျးဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါမျောတျောယာဉျ ၆ စီးကိုဝယျယူရာတှငျ ဂပြနျနိုငျငံရှိ မျောတျောယာဉျထုတျလုပျသညျ့နိုငျငံမှ ရနျကုနျဆိပျကမျးအရောကျတနျဖိုး၊ တိုကျရိုကျမှာယူသညျ့စနဈဖွငျ့ ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါတယျ။ ယငျးသို့ဝယျယူခွငျးဖွငျ့ နိုငျငံတျောအကွီးအကဲမြားရဲ့ ပွညျတှငျးခရီးစဉျမြား သှားလာရာတှငျ လုံခွုံစိတျခရြမှုရှိစှာနှငျ့ အန်တရာယျကငျးစှာဖွငျ့အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာအသုံးပွုနိုငျခွငျး၊ နိုငျငံတျောအဆငျ့ ဧညျ့သညျတျောမြား၏ ပွညျတှငျးခရီးစဉျမြားတှငျလညျး နိုငျငံတျောဧညျ့ယာဉျဖွငျ့ အသုံးပွုနိုငျခွငျးစတဲ့အကြိုးကြေးဇူးမြားကိုရရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ” ဟု စီမံကိနျး၊ ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ စကျမှုဝနျကွီးဌာန၊ ဒုတိယဝနျကွီး ဦးမောငျမောငျဝငျးက ပွောသညျ။
ဝယျယူမညျ့ မျောတျောယာဉျအမြိုးအစားမှာ တိုယိုတာ လနျခရူဆာ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ တို့ဖွဈပွီး စုစုပေါငျး ၆ စီး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ရနျကုနျဆိပျကမျးအရောကျတနျဖိုးအနဖွေငျ့အမရေိကနျဒျေါလာ ၇.၃၅၉၂ သိနျးဖွဈကာ ၎င်းငျးအပျေါတှငျ အထူးကုနျစညျအဖွဈသညျ့ ပွညျထောငျစုအခှနျအကောကျဥပဒေ၊ ပုဒျမ- ၁၁ ပါပွဌာနျးခကျြအရ ကုနျးပျေါရောကျတနျဖိုး၏ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးဖွဈသော အမရေိကနျဒျေါလာ ၃. ၆၇၉၆ သိနျးကသြငျ့မညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ကုနျသှယျလုပျငနျးခှနျအဖွဈ ယငျးဥပဒပေုဒျမ-၁၄ ပါပွဋ်ဌာနျးခကျြအရ အထူးကုနျစညျခှနျအပါအဝငျဖွဈသော ကုနျးပျေါရောကျတနျဖိုး၏ ၅ ရာခိုငျနှုနျးဖွဈသညျ့အမရေိကနျဒျေါလာ ဝ. ၅၅၁၉ သိနျးကသြငျ့မညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါမျောတျောယာဉျခွောကျစီးအတှကျ စီမံကိနျး၊ ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ စကျမှုဝနျကွီးဌာန၊ ဗဟိုစကျပစ်စညျး စဈဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ်ဍာရေးနှဈ ငှလေုံးငှရေငျးအသုံးစရိတျကပျြ ၇၄၉. ၉၉၈ သနျး ခှငျ့ပွုပါရှိပွီးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
- အံ့ညီညီ- နပွေညျတျော(အကုနျသိသတငျးဌာန)